MAHAFINY Airbus A380 Air France FSX - Freeware
Ireto ny farany teraka avy amin'ny Air France, Airbus A380! Ny tena Fifaliana ny fiara sy thrills antoka, ahitana fomba amam-panao sy ny rafitra feo manokana 2D modely. Fampitandremana tsy virtoaly cockpit, rehefa nanomboka, marina tsindrio eo amin'ny varavarana lamba, ary mifidy 2D cockpit jerena.
- Oktobra 30, 2009, Air France-KLM no nahazo ny voalohany Airbus A380
- Novambra 20, 2009, ny orinasa nanao ny zazavavy nandositra ny A380 eo Paris sy New York tamin'ny 538 mpandeha tao anatiny.
Air France no maka ny fanaterana ny Airbus voalohany A380, izao tontolo izao lehibe indrindra fiaramanidina, izay afaka hitondra 538 mpandeha ny 13,000 km. Telo roa ambin'ny folo lahy amin'ny fiaramanidina mba hatolotra ho Air France teo anelanelan'ny fotoana izao sy ny lohataona 2010, mba ho akaiky arahina fahefatra. Manomboka amin'ny 23 Novambra 2009, ny Air France A380 dia niasa tamin'ny sidina isan'andro eo Paris - Charles de Gaulle sy New York - JFK, arahin'ny Paris-Johannesburg nandritra ny ririnina 2009-2010.
Air France àry Eoropeana voalohany mitondra ny miasa izany Superjumbo, sy ny zotram-piaramanidina voalohany maneran-tany mba hanolotra hamidy ho sidina eo Eoropa sy Etazonia tamin'ny fiaramanidina ity.
Ny A380 no tsara indrindra mifanaraka amin'ny paik'ady ny Air France, ary ny habeny dia tsara lalao ho an'ny zotram-piaramanidina ny mahery ao amin'ny foiben'ny Paris - Charles de Gaulle.
Efatra ny fanjakana-avy-ny-kanto GP 7200 fitaovana, ny aerodynamic endrika sy ny fuselage fampidirana ny teknolojia farany indrindra manao ny A380 ny tontolo iainana indrindra-namana fiaramanidina ny ny sokajy.
«Ao amin'ny 1996, Air France monina ny fanapahan-kevitra mba hahazoana ny A380 amin'ny tanjona fepetra izay voaporofo fa ny fanatanterahana ity voromby ity Ny tena tsara mifanaraka amin'ny Company ny fepetra», nanambara Jean-Cyrille Spinetta, Filohan'ny Biraon'ny Tale ny Air France-KLM .
Ny A380 mirehareha fahafahana mitovy ny an'ny Boeing 777-200 sy ny Airbus A340-300 mitambatra, raha manolotra ny 20% fampihenana ny vola lany amin'ny fandidiana.
«A380 tsirairay dia hanampy Air France hamonjy 12 mba 15 tapitrisa euros isan-taona, izay, eto amin'ity toe-draharaha ara-toekarena ketraka, manome ny orinasa miaraka amin'ny fitaovana mba hanohitra ny krizy. Air France koa dia ho afaka ny hanatitra ny mpanjifa na dia lehibe kokoa fampiononana, raha ny fitandremana ny vola lany eo ambany fanaraha-maso. Ankoatra izany, ny fanatanterahana ny A380 dia mifanaraka amin'ny tontolo iainana ny orinasa fanoloran-tena », nanampy Pierre-Henri Gourgeon, Tale Jeneralin'ny Air France.
Air France ny A380 manome mpandeha telo kilasy: La Première-First - 9 seza teo amin'ny tokotanin-tsambo lehibe - Affaires-Business - 80 seza ao amin'ny tokotanin-tsambo ambony - ary voyageur-Toekarena 449 seza niely ny roa miravaka ny. Ao amin'ny trano fialan-tsasatray mangina miavaka tsirairay, Air France no namorona akaiky mampitony ambience, noho ny Adjustable jiro mifanaraka ny samy hafa dingana ny sidina. Na izany ho fivoriana teboka na ny fialam-boly faritra, isaky ny efitra efa manify avy amin'ny zava-drehetra mpandeha mila manao ny sidina zavatra niainany iray tena mahafinaritra. 22 sidina mpanompony dia tao an-tsambo mba hanompo ny 538 mpanjifa.
Efa tamin'ny 1996, Air France nandray anjara tamin'ny vondrona miasa anisan'izany Airbus sy ny fandefasana lehibe mitondra ny A380, hanao ny mari ny fiaramanidina izay mety hihaona mpanjifa fanantenana, ary efa voaomana ho amin'ny fahatongavany hatramin'ny 2003. Air France ihany koa niara-niasa tamin'ny manam-pahefana amin'ny seranam-piaramanidina mba zatra tany trano io fiaramanidina vaovao, voaofana na tantsambo sy ny mpiasa tany sy ny vola ao amin'ny mety fiakarana fitaovana.
Downloads 58 569